Ritsumeikan တက္ကသိုလ်မှ Community & Regional Policy Studies Major (CRPS)အတွက် ဂျပန်အစိုးရ (MEXT) ပညာ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ဂျပန်ရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ritsumeikan University မှာ (၄) နှစ်တာအတွင်းကျောင်းစရိတ်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ လစဉ်နေထိုင်စားသောက်စရိတ် နဲ့ လေယာဉ်စရိတ် စတာတွေကို ၁၀၀ % ထောက်ပဲ့ပေးမယ့် ဘွဲ့ကြို စကောလားရှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
စကောလားရှစ်ရဲ့ အားသာချက်က နိုင်ငံပေါင်းစုံက နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြိုင်ပြီးလျှောက်ရမှာ မဟုတ်ဘဲ ဗီယမ်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ ၊ မြန်မာ စတဲ့ စုစုပေါင်း နိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေနဲ့ပဲ ပြိုင်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ritsumeikan တက္ကသိုလ်မှ Community & Regional Policy Studies Major (CRPS)အတွက် ဂျပန်အစိုးရ (MEXT) ပညာသင်ဆု
MEXTသည်ပညာရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊အားကစား၊သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနကိုကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဂျပန်တွင်ပညာသင်လိုသောကျောင်းသားများအတွက် MEXT ပညာသင်ဆုကိုလူသိများပါသည်။
Ritsumeikanတက္ကသိုလ်မှ၁၀၀%အထိကျောင်းလခလျှော့ချရေးပညာသင်ဆုအပြင်Community and Regional Policy Studies Major (CRPS)က်ထားသောကျော င်းသားများသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိလှသော MEXT ပညာသင်ဆုကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ
၄ နှစ် ***
- ကျောင်းလခလျှော့ချနိုင်မှု (ဝင်ခွင့်ကြေးကိုလည်းလျှော့ပေါ့)
- နေထိုင်မှု စရိတ် - အနီးစပ်ဆုံး တစ်လလျှင် ယန်း ၁၂၀,၀၀၀ ***
1. Dec. 8, 2021– Jan. 11, 2022
2. Feb. 16, 2022– Mar. 8, 2022
*အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ တက္ကသိုလ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
**ကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အညီဘတ်ဂျက်ပမာဏကိုနှစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှု များ ရှိနိုင်ပါသည်။
***ပညာသင်ဆုလက်ခံရရှိသူများသည်GPAကို၂.၃/၃.၀နှင့်အထက်ထိန်းထားနိုင်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကပညာသင်ဆုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသားများသည် MEXT ပညာသင်ဆုအတွက်သီးခြားလျှောက်လွှာတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Ritsumeikan တက္ကသိုလ်မှ CRPS Major သို့ကျောင်းသားများလျှောက်ထားသောအခါ MEXT ပညာသင်ဆုအတွက်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင် MEXT ပညာသင်ဆုကို မရရှိပါက သင်သည် Ritsumeikan တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းလခလျှော့ချရေးပညာသင်ဆုများ (၂၀%၊၅၀% သို့မဟုတ် ၁၀၀%) ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။
၁-၁ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ (အခမဲ့)
လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ
အဓိက စကားလုံး - ဂျပန်၌ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်မှု
သြစတြေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းထားသော ဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့ ရနိုင်သော ပရိုဂရမ်
■ CRPS ဘွဲ့ကြို အတန်း မည်သို့ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက်များ
MEXT Scholarship သည် “Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Scholarship” ကို ဆိုလိုပြီး “Monbukagakusho” ဟုလည်း သိကြသည်။
Latest Post International Read 744 times
အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များမှ အခမဲ့သင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ
ဆရာဦးကိုဌေးဝင်း သင်ကြားပို့ချပေးထားတဲ့ "Read the Passage" လှည့်ကွက်များနဲ့ ဖြေဆိုနည်းများ
2022 မလေးရှား ပညာရေး